कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! – Sandesh munch
कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि !
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०४, २०७७ समय: १४:५९:१९
यदि तपाईको खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने त्यसले तपाईंको चिन्ता बढाउँछ । यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि महिलाहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन् ।
विभिन्न क्रिम र लोसन लगाउने गर्छन् । तर, त्यस्ता क्रिमले कुनै असर गर्दैन ।कुर्कुच्चा सफा गर्नुपर्छ:नुहाउँदा आफ्नो कुर्कुच्चालाई स्क्राबले सफा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मृत छाला र फोहोर निस्कन्छ । बाहिरबाट घर आइसकेपछि आफ्नो खुट्टालाई तातो पानीमा डुबाएर सफा गर्नुपर्छ ।
कुर्कुच्चालाई नरम बनाउनुपर्छ:पैतालामा तेल ग्रन्थी नभएका कारण यो सधैं सुख्खा हुन्छ । त्यसको लागि तपाईं राति सुत्नु अगाडि त्यसमा तेल अथवा क्रिमले मसाज गर्नुपर्छ ।
केराको गुदी:फुटेको कुर्कुच्चामा केराको गुदी लगाउनुपर्छ । त्यसलाई १० मिनेटसम्म राखेर त्यसपछि चिसो पानीले धुनुपर्छ । जबसम्म तपाईंको खुट्टा राम्रो हुँदैन । तबसम्म दिनमा एक पटक गर्नुपर्छ ।
कागती:खुट्टालाई कागती र तातो पानीको घोलमा १५ मिनेटसम्म डुबाउनुपर्छ । पैतालालाई स्क्राब गर्नुपर्छ । राम्रोसँग धोएर मोइस्चराइजर लगाएर मोजा लगाउनुपर्छ ।
ग्लिसिरीनको घोल:आधा बाल्टिन पानीमा ग्लिसिरीन हाल्ने र १० मिनेटसम्म त्यस घोलमा खुट्टा डुबाउने गर्नुपर्छ । त्यसपछि चिसो पानीले खुट्टा धुनुपर्छ र आफैं सुक्न दिनुपर्छ । खुट्टा सुकेपछि लोसन लगाएर आफ्नो खुट्टालाई नरम बनाउन सकिन्छ ।